Oke Osimiri Mediterenian ga - aghọ oke ohia n'ime afọ 100 | Network Meteorology
Portillo nke German | | Mgbanwe ihu igwe, Ciencia
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe n'ọtụtụ buru ibu enweghị ike ịkọwa mgbe ụfọdụ, ebe ọ bụ na anyị amaghị millimita mmekọrịta na njikọ niile dị n'etiti ndị dị ndụ na mbara ala. Ihe akwadoro na nyocha nke Mahadum Córdoba (UCO) na mmekorita ya na Mahadum Wageningen, Netherlands, bụ na oke ohia Mediterenian ga-ebelata nke nta nke nta ruo mgbe ọ ga-adị nkọ n'ihe dị ka afọ 100 n'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe.
UCO ekwuola na nkwupụta na mgbanwe ihu igwe bụ isiokwu dị oke mkpa na nchịkọta na ihe omume na ọkwa mba ụwa nke metụtara akụkụ nke mbọ nke ndị sayensị na-amụ ihe dị egwu na ihe na-echere ụwa.
1 Mgbanwe ihu igwe na Mediterranean
2 Oké Osimiri Mediterenian kachasị emetụta mgbanwe ihu igwe
3 Oku Cork na-akawanye mfe
Mgbanwe ihu igwe na Mediterranean
Mgbalị iji kwụsị mgbanwe ihu igwe adịghị ike zuru oke iji gbochie okpomọkụ ụwa ka ọ ghara ịrị elu site na Celsius abụọ ruo atọ n'ihe dị ka otu narị afọ, na-eduga na mmiri ozuzo.
Ajụjụ a na-enye nsogbu emeela ka otu ndị na-eme nchọpụta UCO mụọ etu osisi si emeghachi omume na ebili okpomọkụ. Ọmụmụ ihe ahụ nyochara otú osisi si emeghachi omume ụkọ mmiri ozuzo na otu ụdị dị iche iche nke flora na fauna metụtara si agbake na mmebi.
Oku achicha bu otu n'ime umu nke mgbanwe ikuku ga-emetuta. Ndi otu nyocha UCO lekwasịrị anya na oke ohia Mediterenian, ebe obu ebe obu otutu ihe ndi ozo di na Spain. Ihe omumu a gosiputara na oke ohia Mediterenian ga ata ahuhu karia n'ihi mgbanwe ihu igwe karia ihe mkpochapu nke di na mbara igwe. N'ime otu narị afọ a ga-agbanwe ụdị odida obodo a, ọ ga-abụkarị nke ọma, ebe ọ bụ na ụdị nke mpaghara ahụ dị ka osisi strawberry ma ọ bụ osisi oak ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ pụọ.
Oké Osimiri Mediterenian kachasị emetụta mgbanwe ihu igwe
E bipụtara nnyocha ahụ na magazin ahụ «Ọgwụgwụ osisi«. Nchọpụta ahụ kọwara na ụdị osisi dị iche iche n'ụdị a nọgidere na-enwe okpomọkụ na ụkọ mmiri na-arịwanye elu, na-achịkwa oge ha na-etinye na foto osisi. N'oge photosynthesis, epupụta na-emeghe stomata ha iji gbanwee CO2 site na gburugburu ebe obibi ma mepụta oxygen. Otú ọ dị, mmeghe nke stomata na-akpata ntụgharị nke mmiri na, ya mere, ọ na-efu ya. Karịa okpomọkụ dị na gburugburu ebe obibi, ọzọ mmiri na-efu n'oge photosynthesis.
Anyị na-ekwu maka iwu na mmachi nke usoro dị mkpa maka osisi, nke na-ebelata oge ọkọchị na n'oge ọkọchị iji chekwaa mmiri. N'oge opupu ihe ubi, oghere nke osisi na mpụga dị elu na ọnụego nke photosynthesis dị oke elu n'oge ọkọchị ụkpụrụ na-ada na n'oge mgbụsị akwụkwọ, na mmiri ozuzo, ihe ọkụkụ na-agbake ma na-eto. N'ụzọ dị otú a, n'oge oké ọkọchị, ihe ọkụkụ ahụ na-ebelata oghere a n'èzí ihe dị ka awa abụọ kwa ụbọchị ma ha na-ebu ụzọ eme ya n’ụtụtụ.
Ihe omumu a lebara anya na ufodu ala ndi nkpuru oyi na udu mmiri na-emetụta. Dịka ọmụmaatụ, rockrose, na-ata ahụhụ nke ukwuu n'oge ụkọ mmiri, ọbụlagodi ịhapụ akwụkwọ ha, agbanyeghị, na mmiri ozuzo mbụ nke mgbụsị akwụkwọ, ha bụ ndị mbụ na-agbake. Uru osisi nwere karịa osisi bụ na ha nwere mgbanwe karia nke njirimara ha ma nwee ike ịlanarị nke ọma na gburugburu ebe ihe gburugburu ya adịghị mma. Rockrose nwekwara nnukwu ikike ịchị mgbe ọkụ ma ọ bụ ọkọchị gasịrị, yabụ, ọ bụrụ na osisi na-ebelata mgbe nsogbu mgbanwe ihu igwe gasịrị, ọ bụ rorose ga-achị ma mee ka oke ohia Mediterenian ghọọ ọhịa.
Oku Cork na-akawanye mfe
Okpu ohia achicha enweghi imeghari nke rockrose nwere ihe di iche na okpomoku, unwu ala na ndi ozo, ya mere na mgbake ha mgbe ihe ndia mechara di ezigbo nwayọ. Ọ bụrụ na nke a, anyị gbakwunye na ịmị mkpụrụ n'etiti afọ 20 na 30 dị mkpa, na ndị a na-adịgide ọnwa ole na ole, nke -nkwakwunye- na-arụ ọrụ dị ka nri maka ọtụtụ anụmanụ ma ya mere na-apụ ngwa ngwa, akpu akpu na-abia umu anumanu maka nchekwaba ya na aburu nke abia.
Na mmechi, ihe omumu a gosiputara na oke ohia Mediterenian ga ata ahuhu karie ihe si na mgbanwe nke mgbanwe ihu igwe karia ihe ndi ozo na ya mere, oke ohia ga eji nwayọ laghachi azu iji nweta uzo maka umu ahihia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Oke Osimiri Mediterenian ga-aghọ ebe mkpofu n’ime otu narị afọ
Greenpeace sere nnukwu Sun na Barcelona iji kwado mmeghari ohuru